नेपालीहरु रियल हिरो हुन् भन्दै डब्लुएचओ प्रमुखले गरे यसरी तारिफ – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख डा।टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसले नेपालीहरु हिरो भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपालको मुस्ताङस्थित लेतेमा कोरोना खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीले गरेको प्रयासले विश्वको ध्यान खिचेको तारिफ गर्दै डब्ल्यूएचओका प्रमुख डा।टेड्रोसले एड्हानोम गेहब्रेयसको पनि सोह्री भिडियोले ध्यान खिचेको छ ।
Prevसातामा दुई दिन बिदा, बजार खोलिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने
Nextपेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत !
ओलीले भने– माधव नेपाल प्रचण्डका पुच्छर हुन्, प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न मलाई बाैलाहा कुकुरले टोकेको छ र ?
अधुरो भो छोरोलाइ भ्वाइस जिताउने सपना , रहिनन् ट्याक्सि ड्राइभर कर्णराज गिरिकी आमाको दुखद निधन